Maitiro ekuisa HTML masiginecha muMail application ye iPhone ne iPad | IPhone nhau
Maitiro ekuisa HTML masiginecha muMail app pane iPhone nePad
Pane dzakawanda nguva tinoita "nyanzvi" yekushandisa yedu iPhone kana iPad, uye ngatitarisei izvozvo, izvo zve Yakatumirwa kubva ku iPhone yangu Izvo zvakashata. Asi usazvidya moyo, nekuti kamwe zvakare muActualidad iPhone isu tiri pano kuzotora chestnuts kubva mumoto.
Tichakudzidzisa maitiro ekugadzira nekuisa masiginecha eHTML nemifananidzo uye zvinongedzo mune yeMessage application pane iPhone ne iPad. Aya matipi atinokupa iwe anotora iwe isingasvike maminitsi mashanu uye iwe unogona kunakirwa neyakagadzirirwa zvachose email kuitira kuti utaridzike senge nyanzvi yechokwadi. Usarasikirwa nechero chedzidziso dzatinokudzidzisa iwe.
Semazuva ese, isu tinoperekedza bhuku rino rine vhidhiyo yatakakusiira iwe kumusoro, kana uchida kuona kuti tinozviita sei. Nekudaro, chinhu chekutanga chatichazoda ndeye webhusaiti iyo inotibatsira kugadzira masiginecha eHTML, uye tinokupa mbiri dzesarudzo dzatinowana dzinonyanya kufadza. Imwe yacho ndeye yatakashandisa muvhidhiyo iri pamusoro, uye imwe yacho kukurudzira kukuru. Nezvo iwe unogona kugadzira yako HTML masiginecha kubva ku iPhone yako.
Gadzira siginicha yako mu Mysignature
Gadzira siginicha yako mu HTMLsig
Paunenge iwe wafunga kuti uye kupi kwauri kuenda kuti ugadzire yako HTML siginecha, inguva yekuiisa muMeseji.
Maitiro ekuisa siginecha yeHTML pa iPhone nePad
Kopa zvirimo zvemasaini ako akanyatsogadzirwa
Enda kuZvirongwa uye vhura iyo Mail chikamu kuti upinde sarudzo
Pazasi unogona kuona chikamu "Masiginecha", pinda mairi
Mukati, bvisa chero chiripo uye pfuurira kwenguva refu kuti unamate zvinyorwa zvemasaini
Uchaona kuti yakanamatira asi yarasa mavara, mifananidzo uye dzimwe nguva kunyangwe mifananidzo, usazvidya moyo. Zvino zvaunofanirwa kuita zunza yako iPhone kusvika iyo "Regedza" meseji yaonekwa
Dzvanya pa "Sunungura" kuti ubvise iyo otomatiki fomati yeiyo iPhone
Iwe unotova neyako HTML siginicha ine zvinongedzo, mifananidzo uye marogo akaiswa pane yako kifaa
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuisa HTML masiginecha muMail app pane iPhone nePad
Facebook inogona kuvhura smartwatch yekukwikwidza neApple Watch
YeVanhu Vese - Mwaka 2 Kutanga Kutarisa Featurette, Vhidhiyo Nyowani Kubva Iyo Yakakurumbira Apple TV + Series